Vagadziri veDebian vanoronga kupora nzira | Linux Vakapindwa muropa
Vagadziri veDebian vanoronga maitiro ekupora kwepakeji
Pakati pevhiki dzekupedzisira timu yeDebian yevagadziri yanga ichifunga mukana mutsva wekugona kuita kupora kwepakeji mukati mezvinyorwa zvepamutemo zvekuparadzira.
Iyo hurukuro yakave ichiendeswa kuburikidza neDebian tsamba yekutumira(izvo zvatinogona kubvunza) uye mavari chirongwa ichi chitsva chakakurudzirwa neboka revagadziri, kuti vatore mapakeji akasiiwa.
Kuti unzwisise danho iri zvishoma, isu tinofanirwa kuziva iye Debian sekuwanda kukuru kweLinux inochengetwa uye inotsigirwa nevagadziri vari pasirese.
Pamusoro pazvo ine nharaunda yakakura yevashandisi uye vanhu vanowanzo kupa mapakeji kune iyo kugovera neayo kwete chete timu yayo yepamutemo iri mukutarisira kupa software yeiyi system.
Nezve izvi tinokwanisa kunzwisisa kuti chikamu chakakura chemashandisirwo, maraibhurari uye imwe software yatinoona mukati meDebian inochengetedzwa uye kuvandudzwa nenharaunda yayo.
Naizvozvo, vashandisi vekupedzisira vehurongwa vanogona kunakidzwa nenhamba huru yekushandisa pane ino system.
Kunzwisisa zvishoma iyi pfungwa yekuti software inowedzerwa uye inotsigirwa mukati meDebian repositori. Tinogona kunzwisisa kuti pakupera kwezuva vanhu vanochengeta izvi.
Saka iri futi nyaya yekuti vanhu vanopa rutsigiro uye nekuvandudza kune software iyo yatinogona kuwana muDebian, vanowanzo mira kupa rutsigiro, vasiye kuvandudza.
Nenzira iyi mazhinji emapakeji anowanzove asingatsigirwe uye anova "nherera" mapakeji.
Nezve Debian Package Kununura
Kuziva kuti haazi ese mapakeji anoitirwa kune imwechete nhanho uye mamwe anozongosiiwa pasina kumwezve, Vagadziri veDebian vari kukurukura nezvekugadzirisa kwepakeji mune iyi mhando yemamiriro.
Kufanana nekumwe kugoverwa, Debian ine maitirwo enherera mapakeji kana muchengeti achinge anyangarika kana achizvipira kupa imwe package.
Asi eIyi nzira inodiwa yekudzosa mapakeji ndeyemapakeji asina kuchengetedzwa zvakanaka kana asina kuchengetedzwa zvachose asiri muchikamu che "nherera"
Pasi pemitemo inotsanangurwa, Iyo Debian package inogona kuchengetedzwa kana paine akavhurika bugs, zvikumbiro zvekuvandudzwa kana kana paine zvimwe zvinodiwa kubva kune vashandisi uye hakuna kumbove nebasa ripi zvaro pairi mumwedzi mitanhatu.
Zvakare kana zvikanganiso zviripo zvakakura kupfuura gore rimwe kubva zvavakawanikwa.
Nenzira iyi Izvo zvinokurudzirwa kuti iyo Package Salvaging danho ive inotarisira yekugona kuita zvakafanira kugadzirisa uye / kana kugadziriswa kwemapakeji akadaro kuitira kuti vashandisi vekupedzisira varambe vachinakidzwa nawo.
Kunyangwe parizvino danho iri richiri kukurukurwa nevakagadziri veDebian.
Tinogona kuwana rumwe ruzivo pane iyi Debian package kudzoreredza zano mukati meiyo projekiti wiki, iyo yatinogona kutoshanyira nekudzidza nezvayo. kubva pane iyi link iripazasi.
Zvakare kune avo vanofarira, zvinokwanisika kuteedzera runyorwa rwekutumira rwuri mukati kubva pane inotevera chinongedzo.
Pano tinogona kuona izvo zvinokudziridzwa nevagadziri nezve ichi chikumbiro.
Ini pachangu, ndinofunga ichi chiitiko chakanak, nekuti mapakeji akasiyana akange achishandiswa zvakanaka musystem uye anga asisatsigirwe anogona kuve neyechipiri yekushandisa.
Uye kune rimwe divi zvinoitawo kuti ndifunge kuti chokwadi chekuti mumwe munhu arikutungamira kwekutangazve budiriro chinogona kukanganisa zvakanyanya pfungwa hombe yesoftware iyo inorongwa kupora.
Pakupedzisira ikozvino Isu tinoziva kuti iwo musoro wenyaya uri kukurukurwa pane tsamba yekutumira uye kupinda kuchazogamuchirwa kusvika munaGunyana pavanosvika pabasa vachinyora vhezheni yekupedzisira yePakeji Kugonesa nhungamiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vagadziri veDebian vanoronga maitiro ekupora kwepakeji
Onionshare, yakasarudzika sarudzo yekugovana mafaira zvakachengeteka
OpenMW: Iyo Yakavhurika Sosi Reimplementation yeiyo Vakuru Mipumburu III: Morrowind